Sony က Vegas Pro က 15 အဘို့ကို crack 32/64 bit Windows မှာ & Mac ကို Serial Number
နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » Sony က Vegas Pro က 15 ရိုက်သံ
Sony က Vegas Pro က 15 ရိုက်သံ
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဇန္နဝါရီလ 29, 2017
Sony က Vegas Pro က Download 15 အခမဲ့ crack
Sony က Vegas Pro က 15 အက်ကွဲအများအပြားသစ်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Sony က Vegas Pro က Download 15 အပြည့်အဝအက်ကွဲနှင့် patch ကိုအယ်ဒီတာတစ်ဦးအစပြုသူဖော်ရွေ interface နဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားခိုင်မာတဲ့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်လည်းအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်-ဖော်ရွေသောစျေးနှုန်းရှိပါတယ်အားလုံးမဟုတ်ပါ. ဒေါင်းလုပ်, Sony က Vegas Pro က 15 အပြည့်အဝအက်ကွဲ keygen ဆော့ဖျဝဲ, လေ့လာသင်ယူနှင့်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအချိန်ဇယား-based အယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်. တချို့ကပြုပြင်မွမ်းမံ Sony က Vegas Pro ကဖန်ဆင်းထားပါသည် 15 လိုလားတဲ့အတွက်မဟုတ်ခဲ့သည့် key ကို crack 12.
ယခင်ကတစ်ဦးအထက် toolbar ကိုပေါ်မှာတည်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များ Timeline ကိုအောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြကဲ့သို့သော. အဆိုပါအဖန်ဖန်-အသုံးပြုသော tools တွေနဲ့ action ကိုမှအနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာယူဆောင်နေကြ. ထို့အပြင်, အသစ်ငါးခုပြင်ဆင်ရန် tools တွေကိုအခုအသစ် toolbar ကိုကနေစီမံခန့်ခွဲများမှာ: shuffle, ရေကူးဘောင်းဘီ, လြှော, အချိန် Stretch / Compression နဲ့ Split ကိုအနားသတ်ရန်. ထိုသူအပေါင်းတို့လုပ်ဆောင်ချက်များကို Pro မှာယခင်ကမရရှိနိုင်ခဲ့ကြ 12 ကီးဘုတ်ကနေတဆင့်ယခုမူကားနှိပ် icon များ အသုံးပြု. သုံးစွဲနိုင်များမှာ. အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းအလားတူစီမံကိန်းနှင့်ဆက်နွယ်နေကြသမျှမီဒီယာဖိုင်တစ်ဦး၏တည်နေရာသို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောစီမံကိန်းကိုသိမ်းဆည်း၏တိုးတက်မှုများအတွက်ကြပြီ, အသိုက်ဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပါဝင်သည်. ယခုတွင်သင်သည် Sony Vegas Pro ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် 15 ဒါကိုတော့ 64 Patch နဲ့ Sony Vegas Pro ကအတူနည်းနည်း 15 ရိုက်သံ 32 bit နဲ့ patch ကို.
Sony က Vegas Pro က 15 အခမဲ့ downloads, အပြည့်အဝဗားရှင်း Crack 32/64 နည်းနည်းနှစ်ခုသည် Modes အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းရှိ. အွန်လိုင်း Mode ကို: တစ်ခုခုကိုအတူတူသို့မဟုတ်သီးခြားစီမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည် (နှစ်ခုလုံး, အမှန်တကယ်အချိန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း). အိုင်ပက်တဦးတည်းကိုသုံးပြီးကြောင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်, အမှုအရာကိုရှာခြင်း, အမှုအရာစတင်တောင်မှပြန်ကျော့ခေတ္တရပ်တန့်ပြီး. option ကိုကျဆင်းနေမှတ်စုများလည်းဖြစ်ပါတယ် အချိန်ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင် frame ကိုတိကျမှန်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအမှတ်အသားများကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်လိုပဲ. အော့ဖ်လိုင်း Mode ကို: ဒီ mode တစ်စုံတစ်ဦးကထို program မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ပါဘူးလျှင်ပင်ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုစီမံကိန်းဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြု. အကောင်းဆုံး feature ကိုသုံးသပ်ရေးအမှတ်အသားများနှင့်မှတ်စုထွက်ခွာခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်.
Sony က Vegas Pro က 15 အပြည့်အဝအင်္ဂါရပ်များ Crack
Sony က Vegas Pro က 15 Keygen အခြား Windows-based လိုလားသူ-Level အယ်ဒီတာများမှနှိုင်းယှဉ်ပါကစျေးနှုန်းသက်သာဖြစ်ပါသည်
Sony က Vegas Pro က 15 သော့ချက်အသုံးဝင်သော plugins ကိုအသုံးပြုရှိသည်ဖို့လွယ်ကူသည်
Sony က Vegas Pro က 15 patch ကိုပူးပေါင်း app ကိုရှိ
အသံကျယ်မီတာလည်းဒီဗားရှင်းအတွက် update လုပ်နေကြတယ်
NewBlueFX ဗီဒီယို Essentials (အထုပ် features တွေ 100 ရလာဒ်ကဒိအတွက် 10 အဆိုပါ VFX ဧရိယာ၌စီမံကိန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ခေတ်မီ plugins ကို။)
Sony က Vegas Pro က 15 patch လည်း XAVC အချင်းချင်းအပြန်အလှန် MXF စမတ်ဆပ်ပြီ
multi-tool ကိုပါရာဒိုင်း: မကြာခဏအသုံးပြုကြသည် tools တွေကိုအချိန်ဇယားကိုအောက်တွင်တည်ရှိသည်တဲ့ pop-up menu ကိုအတွက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်.
Project မှမော်ကွန်း: စီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်မီဒီယာအချိန်ဇယားပေါ်တွင်အသုံးပြုခံရနဲ့ဆက်စပ်မီဒီယာ Archive.
Sony က Vegas Pro ကစနစ်လိုအပ်ချက်များ
Windows ကို 7,8,8.1,10 ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်
quad-core, Intel Core i5 သို့မဟုတ် သာ. ကောင်း၏ပရို
4installed မှတ်ဉာဏ်၏ GB အထိ (ရမ်)
512ကို MB ဂရစ်ဖစ်
6ခဲယဉ်း၏ GB ကိုအခမဲ့အာကာသ
Sony က Vegas Pro က Crack လုပ်နည်း?
ဒေါင်းလုပ် Sony က Vegas Pro က 14 အခမဲ့ ပေးထားသောခလုတ်ကိုထံမှ
ဆိုနီမှအသစ် Vegas Pro က Install
ပွင့်လင်းအက်ကွဲ folder ကို & လူအပေါင်းတို့သည်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်.
Sony က Vegas Pro က Mac အတွက် Crack ဒေါင်းလုပ်လုပ် folder ထဲမှာလည်းရရှိနိုင်သော့ချက်
Mac အတွက်, အသုံးပြုသူများအောက်က activating နည်းလမ်းကိုဖတ်ပါ
Sony က Vegas Pro က 15 အက်ကွဲ Mac ကိုပင်ပွင့်လင်း Crack, ပေးထားသောခလုတ်ကိုကနေအပြည့်အဝ pack ကို Download လုပ်ပါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံ server ကိုသင့်ရဲ့ mac server ကို connect မည်ကိုစိုးရိမ်မနေပါနဲ့. Sony Vegas Pro အတွက်မြေတပြင်လုံးညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ပါ 14 mac .txt ဖိုင်ကို crack.
Sony က Vegas Pro က Download 15 ရိုက်သံ
← wifi Hacker က Apk 2017 စုစုပေါင်း Warhammer Crack →